China GREATPOOLl's Pool & SPA Product in Ramada Group's Sanya Hotel orinasa sy mpanamboatra | Dobo lehibe
GREATPOOL dia mamatsy ny famolavolana sy ny fitaovana sy ny fitaovana rehetra ho an'ny dobo filomanosana & SPA loharano mafana ao amin'ny hotely vao naorina an'i Ramada Group ao Sanya City, faritanin'i Hainan, Shina.
Miorina amin'ny fepetra takian'ny tetikasa sy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, ny sampana teknikan'ny GREATPOOL dia nanao ny famolavolana tetikasa miaraka amin'ny lisitry ny vokatra, izay tena eken'ny mpanjifa. Ny fitaovana sy ny fitaovana rehetra, ahitana ny paompy, sivana, ambanin'ny rano IP68 LED jiro, rivotra loharano hafanana paompy, mpanova, hafanana exchanger, fanaraha-maso kabinetra sy ny vokatra hafa, dia omen'ny GREATPOOL, amin'ny azo antoka kalitao, manatanteraka ny tetikasa takiana.
Amin'ity tetikasa ity, paompy hafanana loharanon-drivotra mahery vaika 9 an'ny GREATPOOL no hanome rano mafana ho an'ny dobo filomanosana & SPA loharano mafana, izay ambany kokoa ny fanjifana angovo, tsara kokoa ny tontolo iainana. Ny paompy hafanana ihany koa dia manana rafitra fanaraha-maso azo itokisana sy manan-tsaina, lojika mora ampiasaina, tsotra ny miasa na mikojakoja, ary manana fiarovana isan-karazany, miantoka ny fandidiana sy ny fandehanana tsy misy ahiahy.
Ny paompy hafanana 9 dia misy ny paompy hafanana 4 miaraka amin'ny fahafahan'ny fanafanana 19KW (herin'ny fidirana amin'ny 4.5KW), paompy hafanana 4 miaraka amin'ny fahafahan'ny fanafanana 26KW (herin'ny 6.4KW) ary ny paompy hafanana 1 miaraka amin'ny fahafaha-manafana 104KW (herin'ny fidirana 26KW), efa napetraka avokoa.
GREATPOOL, mitondra foana ny kalitaon'ny vokatra ho laharam-pahamehana voalohany, ary nanao ny andian-dahatsoratra vokatra paompy hafanana nankatoavin'ny CE, CB & ROHS sns., Ny famokarana sy ny fanaraha-maso kalitao dia ampiharina araka ny fenitra ISO9001 & ISO14001. Ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana no marika amin'ny vokatray, ary ny fanoloran-tenanay amin'ny mpanjifa rehetra.
Tetikasa dobo filomanosana, Serivisy dobo filomanosana, Dobo filomanosana Infinity Edge, Company Pool, Vahaolana amin'ny dobo filomanosana ho an'ny daholobe, Vahaolana amin'ny dobo filomanosana ivelany,